5-ta kulan ee ugu fiican Chess-ka Android | Androidsis
Isticmaalayaasha Android waxay leeyihiin xul ballaaran oo ciyaaro ah oo la heli karo. Waxaa jira dhammaan noocyada aan qiyaasi karno, si dhammaan isticmaaleyaashu ay u helaan wax iyaga jecel. Nooc ka mid ah oo aan leenahay ciyaaro dhowr ah inkasta oo aysan ogeyn dadweynaha guud, waa ciyaaraha chess-ka. Waxaan sidoo kale ku raaxeysan karnaa iyaga oo ku jira Android.
Nooc aad u tiro badan oo ka khatar yar, laakiin mid ka mid ah oo xiiso leh. Maaddaama aan ku tababbaran karno oo aan horumarin karno wax badan oo lagu ciyaaro cayaaraha chess-ka Haddii aan galno Dukaanka Play-ka waxaan helnaa fursado badan oo la heli karo. Laakiin, waxaan go'aansanay inaan xulno kuwa ugu fiican.
Thanks to xulitaankan waxaad awoodi doontaa inaad ku tababarto oo aad ku raaxeysato nooc gebi ahaanba ka duwan ciyaarta intii caadiga ahayd.. Kadibna waxaan kaaga tagi doonaa xulashadaan. Diyaar ma u tahay inaad la kulanto dhammaantood?
1 Chess - Ciyaar iyo Baro
2 Dhibaatooyinka Chess
3 Ciyaar Magnus - Chess
4 Chess la saaxiib
Chess - Ciyaar iyo Baro
Waa ciyaartii ugu fiicnayd ee nooceeda ah in la barto lana hagaajiyo heerkaaga. Tan iyo markii aan helnay wadar dhan 50.000 loox oo kala duwan oo heerarka oo dhan ah. Marka waxaan ka bilaabi karnaa heerka ugu fudud sidaasna horumar ku gaari karnaa. Hab wanaagsan oo loo tababaro oo loo noqdo ciyaaryahan chess fiican oo dhameystiran. Waxaan leenahay ikhtiyaarka aan kula ciyaarno kombiyuutarka. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay gole ay ku jiraan maqaallo badan oo leh macluumaad iyo talooyin.
Ku soo degsashada ciyaarta Android waa bilaash. In kastoo gudaha aan ka helno wax iibsasho.
Chess Play iyo Baro
Ciyaar waxoogaa ka duwan laakiin mid ku habboon in lagu carqaladeeyo aqoontaada. Markaa hadaad tahay isticmaale horey khibrad uleh ciyaarida, waxaad kufasan kartaa ciyaartaan waxaadna hubin kartaa inta cilmigaani gaarsiisan yahay. Waxaan leenahay guddiyo kala duwan ciyaarta. Intaas waxaa sii dheer, waxaan baran karnaa tabaha cusub ee naga caawinaya inaan horumarino heerkeenna. Heerarka guud ahaan xoogaa wey adag yihiin. Marka maahan ikhtiyaar dhammaan isticmaaleyaasha.
Soo degsashada ciyaartan loogu talagalay Android waa bilaash, in kasta oo aan wax ka iibsanno gudaha.
Dhibaatooyinka Chess (xujooyinka)
Ciyaar Magnus - Chess
Noorweey Magnus Carlsen waa ciyaaryahanka ugu fiican adduunka maanta. Wuxuu jabiyay rikoorro badan oo adduunka ah, gaar ahaan tan iyo markii uu bilaabay inuu ciyaaro yaraantiisii. Thanks to kulankaan waxaan awoodi doonaa inaan si toos ah wax uga barto ciyaaryahanka ugu fiican adduunka. Khiyaamo, talooyin, iyo qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqyada la og yahay ee ciyaaryahanka iyo ciyaaraha ayaa lagu soo bandhigayaa ciyaarta. Marka waxaan baran karnaa sidii inay ahayd fasal gaar loo leeyahay oo af Noorweeji ah.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kasta oo, sida labada kulan ee kale, aan gudaha ka helno wax iibsasho.
Ciyaar Magnus - Ciyaar Chess
Developer: Ciyaar Magnus
Chess la saaxiib
Magaca ciyaarta ayaa durba na siinaya tilmaan muhiim ah oo ku saabsan hawlgalkeeda. Xaaladdan oo kale waxaan awoodi doonnaa inaan si toos ah ula ciyaarno saaxiibbadeen. In kasta oo ciyaartu sidoo kale na siineyso ikhtiyaar aan kula ciyaarno dadka adduunka oo idil. Marka waxaan dooran karnaa waxa aan inta badan dooneyno. Waxaan leenahay sheeko ku dhisan ciyaarta. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay ikhtiyaar loo yaqaan 'rematch' haddii ay dhacdo inaan ciyaar lumino. Marka waa wax aad u madadaalo leh in lala tartamo asxaabtayada ama dadka kale.
Soo degsashada ciyaartan chess-ka ee loogu talagalay Android waa bilaash. Inkasta oo sida kiisaska kale, aan ka helno wax ka iibsasho gudaheeda.
Chess with asxaab bilaash ah
Waxaan liiska ku xireynaa ciyaar chess caadi ah. Dareenkaan waa ciyaar fudud, oo heerar kala duwan leh. Laakiin taasi waxay noo soo bandhigaysaa guddi iyo hawlgal u dhow midka ciyaarta dhabta ah. Markaa malahan xeelado badan ama kudarsasho sida kuwa kale. Laakiin, fududaanta ciyaarta waa mid ka mid ah wanaaggeeda. Waxaan leenahay ilaa 12 heerar oo kala duwan ciyaarta.
Ku soo degsashada ciyaartan loogu talagalay Android waxay ku kacaysaa 1,19 euro. In kastoo, aysan ku lahayn wax iibsi iyo xayeysiin gudaha ah.
Shantan ayaa ah ciyaaraha chess-ka ugu fiican ee aan maanta Android ka heli karno. Waxaan rajeyneynaa inaad iyaga xiiso u yeelatid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha chess ee ugu wanaagsan Android
Rasmiga ah Ulefone Armor 2S oo leh shahaado IP68 ayaa si rasmi ah loo bilaabay